BAOLINA KITRA – «CAN 2019» :: Tsy hisy ny fiaramanidina manokana ho an’ny Barean’i Madagasikara • AoRaha
BAOLINA KITRA – «CAN 2019» Tsy hisy ny fiaramanidina manokana ho an’ny Barean’i Madagasikara
Handeha amina sidina tsotra iarahana amin’ny besinimaro ny ekipam-pirenena malagasy taranja baolina kitra na ny Barean’i Mada- gasikara amin’ny lalao mandroso hotanterahina any Malabo, Guinée Equatoriale, amin’ny 13 oktobra ho avy izao. Mbola io sidina io ihany koa no hiverenan’izy ireo eto Antananarivo hamonjena ny lalao miverina.
“Niezaka ny nifandray tamin’ny mpitondra ny firenena izahay. Nanao izay fomba rehetra ihany koa hahazoana sidina manokana amin’ny Air Madagascar saingy nilaza ity farany fa tsy afaka ny hanao izany. Tsy nisy nahafa-po ny valin-teny rehetra”, araka ny nambaran’ i Doda Andriamiasasoa, filohan’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra, mpisolo toerana, teny Isoraka, omaly, nandritra ny resaka tamin’ ny mpanao gazety.
Efa nisy ihany koa ny fotoana nifampiresahana tamin’ny ekipan’i Guinée Equatoriale mba hiraisana fiaramanidina amin’izy ireo, saingy ny vola
50 000 dôlara, izay nidina ho 45 000 dôlara, no tsy hita indray. Tsy nisy hatramin’izao fanamafisana ny handoavana na tsia an’io vola io avy amin’ny governemanta malagasy. Noho izany dia nanapa-kevitra izahay ny hamandrika toerana amina sidina iarahana amin’ny besinimaro sao dia sady tsy an’ny atsy no tsy an’ny aroa eo”, hoy izy.
Ho avy any Guinée Equatoriale amin’ny talata 9 oktobra ho avy izao ireo mpilalao mpila ravinahitra, raha ny ampitson’io kosa vao tonga ny mpilalao avy eto an-toerana. Ny alahady 14 oktobra indray izy ireo no hiala any ka hijanona alina iray ao Nairobi, mialoha ny hahatongavana eto Madagasikara amin’ ny alatsinainy 15 oktobra. “Tafakatra hatramin’ny 15 000 dôlara ny fandaniana amin’izany. Nifampiresaka tamin’ny tompon’andraikitra ambony tao amin’ny Fifa izahay ary nanamafy izy ireo fa handray an-tanana ny fandaniana “, hoy hatrany i Doda Andriamiasasoa.
Fanafoanana ny tsimatimanota sy fanairana ny Filoha Takian’ny fiarahamonim-pirenena ny fitazonana am-ponja an’ilay depioten’i Mahabo
Baolina Kitra – Fotodrafitrasa Hatomboka amin’ity desambra ity ny fanavaozanaan’i Mahamasina
CCI Ivato Hitantara ny fiainany an-kira i Henri Ratsimbazafy
Fitaterana an-tanety Hisokatra amin’ny volana janoary 2020 ny toby fiantsonana eny Amoronankona
FANDRATRANA :: Vehivavy iray voafiran’ ny zaodahiny ny antsy
FAHAZOAN-DALANA HAMILY BIOMETRIKA :: Ifanilihan’ilay orinasa tompon’antoka sy ny Praiminisitra teo aloha ny hadisoana
Vono olona mahatsiravina Nentin’ireo jiolahy nitsoaka ny lohan’ilay vehivavy
Fifidianana Ben’ny Tanàna Nahafaty olona roa ny lanonam-pandresen’ilay kandidà
Fepetran’ny lehiben’ny fitsarana Voasambotra tany ivelan’ny fonja ilay depiote efa nigadra
Kitra – Fankasitrahana mpilalao Lasan’i Lionel Messi faninenina ny «Ballon d’or»
Trafikan’olombelona Misy mivarotra roanjato tapitrisa ariary ny olona iray